မြန်မာ့နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုဘဏ် | Ministry of Planning and Finance
မြန်မာ့နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုဘဏ်၏ (CBM-NET 2) ဖြင့် မြန်မာကျပ်ငွေ၊ငွေလွှဲဝန်ဆောင်မှု
မြန်မာ့နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုဘဏ်နှင့် ပြည်တွင်းရှိ အခြားဘဏ်များအကြား မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ငွေလွှဲလက်ခံခြင်း၊ လွှဲပြောင်းပေးခြင်းစသည့် ငွေလွှဲဝန်ဆောင်မှုများကို မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်၏ ငွေပေးချေမှုကွန်ယက်စနစ် - ၂ (CBM-NET 2) ကို (၁၆-၁၁-၂၀၂၀) ရက်နေ့မှ စတင်အသုံးပြု၍ မြန်မာ့နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုဘဏ်သည် ငွေလွှဲခနှုန်းထား သက်သာစွာဖြင့် အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ လျင်မြန်စွာ ဆောင်ရွက်ပေးလျက် ရှိပါကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည်။
MPU ၏ New Product (IBFT - Inter Bank Fund Transfer)
၁။ MPU ၏ New Product တစ်ခုဖြစ်သော IBFT (Inter Bank Fund Transfer) ငွေလွှဲခြင်း ဝန်ဆောင်မှုကို မြန်မာ့နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုဘဏ်၏ ATM Card ကိုင်ဆောင်သူများအနေဖြင့် ( ၄-၉-၂၀၂၀ ) ရက်နေ့မှ စတင်အသုံးပြုနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
၂။ IBFT (Inter Bank Fund Transfer) ငွေလွှဲခြင်းဝန်ဆောင်မှုကို မိမိဘဏ်၏ ATMများတွင် အောက်ပါအတိုင်း ငွေလွှဲပြောင်းနိုင်ပါသည်
(က) MFTB ATM တွင် MFTB Card မှ အခြားဘဏ် MPU Card (eg.MWD) သို့ လည်းကောင်း
(ခ) MFTB ATM တွင် အခြားဘဏ် MPU Card (eg. Yoma) မှ အခြားဘဏ် MPU Card ( eg. Yoma)သို့ လည်းကောင်း
(ဂ) MFTB ATM တွင် အခြားဘဏ် MPU Card (eg. Yoma) မှ အခြားဘဏ် MPU Card ( eg. Shwe)သို့ လည်းကောင်း
၃။ IBFT (Inter Bank Fund Transfer) ငွေလွှဲခြင်းဝန်ဆောင်မှုကို အခြားဘဏ်၏ ATM များတွင်လည်း အောက်ပါအတိုင်း ငွေလွှဲပြောင်းနိုင်ပါသည် -
(က) အခြားဘဏ် ATM တွင် MFTB Card မှ MFTB Card သို့ လည်းကောင်း
(ခ) အခြားဘဏ် ATM တွင် MFTB Card မှအခြားဘဏ် MPU Card (eg. UAB) သို့ လည်းကောင်း
(ဂ) အခြားဘဏ် ATM တွင် အခြားဘဏ် MPU Card (eg. CHDB) မှ MFTB Card သို့လည်းကောင်း
၄။ IBFT (Inter Bank Fund Transfer) ငွေလွှဲခြင်းဝန်ဆောင်မှုကို တစ်နေ့လျှင် အနည်းဆုံး ကျပ်တစ်ထောင် (၁,၀၀၀/-) မှ အများဆုံးကျပ်သိန်းတစ်ရာ (၁၀,၀၀၀,၀၀၀/-) အထိ လွှဲပြောင်း နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ဝန်ဆောင်ခ အနေဖြင့် ပုံသေ ကျပ် (၂၀၀/-) နှင့် ငွေလွှဲပြောင်းသည့် ပမာဏ ၏ ( ၀.၀၅% )ကို လွှဲပြောင်းသူ၏ ATM Card Account မှ ကောက်ခံမည်ဖြစ်ပါသည်။
၅။ ယင်းငွေလွှဲဝန်ဆောင်မှုကို လတ်တလောတွင် IBFT (Inter Bank Fund Transfer) ဆောင်ရွက်ပြီးစီးသော MPU အဖွဲ့ဝင်ဘဏ်များဖြစ်သည့် Yoma, Shwe, UAB, RDB, MWD, CHIDB များ၏ ATM များနှင့် ATM Card များသို့သာ ငွေလွှဲပြောင်းနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာ့နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုဘဏ်တွင် Inter Bank Fund Transfer အသုံးပြုနိုင်ရန် ပြင်ဆင်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါ၍ (၄-၉-၂၀၂၀) ရက်နေ့ နံနက် (၁၀:၀၀) နာရီ မှ မွန်းတည့် (၁၂:၀၀) နာရီ အချိန်ထိ မြန်မာ့နိုင်ငံခြား ကုန်သွယ်မှုဘဏ်၏ ATM ဝန်ဆောင်မှုများအားလုံး ခေတ္တရပ်ဆိုင်းထားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေး ကြေညာအပ်ပါသည်။
မြန်မာ့နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုဘဏ်တွင် နိုင်ငံခြားသုံးငွေ၊ ငွေသားအပ်နှံမှုအပေါ်၌ သတ်မှတ် ကောက်ခံလျက်ရှိသော ဘဏ်စရိတ်နှုန်းထား (Deposit Rate) ၀.၃% အား ကောက်ခံမှုမပြုတော့ခြင်းနှင့် ဘဏ်လုပ်ငန်းသုံး စာရွက်စာတမ်းများနှင့် ပုံစံများအား Customer များသို့ အခမဲ့ထုတ်ပေးခြင်းတို့ကို (၁-၂-၂၀၁၉) ရက်နေ့မှ စတင်၍ ဆောင်ရွက်ပေးပြီဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။
မြန်မာ့နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုဘဏ်၊ စာရင်းရှင်(နိုင်ငံခြား)ဌာနစိတ်မှတဆင့် ပုဂ္ဂလိကဘဏ်များနှင့် နိုင်ငံခြားဘဏ်ခွဲများသို့ စာရင်းပြောင်းရွှေ့ခြင်းအတွက် ယခင်ကောက်ခံလျှက်ရှိသော ဘဏ်စရိတ် USD 50/-အစား (2-10-2019) ရက်နေ့မှ စတင်၍ လွှဲပို့ငွေ၏ 0.125% (သို့) ညီမျှသောကျပ် (Minimum USD 50/- (သို့) ညီမျှသောကျပ်) ဖြင့် ကောက်ခံမည်ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ငလျှင်အန္တရာယ် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရေးနှင့် တုံ့ပြန်ရေးစီမံချက်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ငလျှင်အန္တရာယ် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရေးနှင့် တုံ့ပြန်ရေးစီမံချက် 7.45 MB
Myanma Foreign Trade Bank Side Menu
ငွေစုဘဏ်စာရင်း နှင့် ပုံသေအပ်နှံငွေစာရင်းဖွင့်လှစ်ခြင်း
ATM CARD ပြုလုပ်ရန်အတွက် လိုအပ်ချက်များနှင့် အကျိုးကျေးဇူးများ
ပို့ကုန်ဆိုင်ရာ ဘဏ္ဍာရေး အထောက်အပံ့ပေးခြင်း